तीजकै गीत महिलाद्वेषी - meegakhabar
तीज पर्व नजिकिँदै छ । युट्युब तीजगीतले नै भरिएका छन् । नयाँ र पुराना कलाकार म्युजिक भिडियो अपलोड गर्न तछाडमछाड गरिरहेका छन् ।
तर यो दौडको सुरूमै केही प्रश्न उठ्छन् । यस्ता गीतमा हाम्रो समाजको जीवन आएको छ त ? यी गीतले समाजमा महिलाको जीवनलाई अग्रगामी चेतना दिएका छन् त ? तीजको संस्कार धान्ने नाउँमा यी गीतले पछाडि फर्काइरहेका त छैनन् ?
तीजगीत, तीज पर्वका अवसरमा महिलालाई केन्द्रमा राखेर मूलतः महिलाद्वारा गाइने गीत हो । यस्ता गीतमा महिलाका इच्छा–आकांक्षा र अनुभव अभिव्यक्त हुन्छन् । लोक परम्परामा बाँचेका यी गीत पहाडी क्षेत्रका नारीहरूको सामाजिक इतिहासका दस्तावेज पनि हुन् ।
यी गीतमा बालविवाह, अनमेल विवाह र बहुविवाहले महिलाको जीवनमा ल्याएका समस्या, घरपरिवारबाट भोगेका थिचोमिचो र त्यसबाट सिर्जित दर्दहरूको वर्णन हुन्छ । प्रचलित तीजगीत परम्परामा जकडिएका महिलाको मुक्तिका निम्ति बाहिरको संसार चियाउने एउटा मौसमी आँखीझ्याल पनि हो ।
२०७७ सालमा युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएका तीजगीतमा बेसार प्रकरणदेखि सलहसम्म र वाइडबडीदेखि रूकुमको जातीय नरसंहारसम्म समेटिएका छन् । यो आलेखमा यी गीतमा अभिव्यक्त चेतना र महिलाप्रतिको दृष्टिकोण पर्गेल्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
यी तीजगीतमा प्रस्तुत चिन्तन मूलतः तीन प्रकारको देखिन्छ ।
यथास्थितिवादी र प्रतिगामी चिन्तनका तीजगीत
यस वर्षका अधिकांश तीजगीतमा महिलालाई चेतनाहीन, खान–लाउनमात्र ध्यान दिने, उत्ताउला, पति र सासूससुरामाथि उत्पीडन गर्ने दुच्छर चरित्रका रूपमा चित्रण भएको छ । स्वर, संगीत र नृत्य प्रस्तुतिका दृष्टिले अब्बल खुमन अधिकारी र स्मृति तिमिल्सिनाको ‘झोला लुकाउँछन्’ बोलको गीतमा अभिव्यक्त चिन्तन कति पछौटे खालको छ, हेरौं–
छिट्टै लिन आऊ न बाबु भन्छ्यौ दिदी तिम्ले
क्यारम त नि मइले
जुत्ता लुकाउँछिन् बरै तिम्री ब्वारी मेरी उनैले
आजभोलि काली भयौ भन्छौ बाबु तिम्ले
क्यारम त नि मैले
पाउडर लुकाउँछन् बरै तिम्रा भेना मेरा उनैले
यस गीतमा भाइले दिदीलाई लिन जाँदा आफ्ना जुत्ता, पेटी, मोबाइल लुकाइदिएको भन्ने प्रसङ्ग वर्णन गरेर आफ्नी पत्नीलाई विवेकहीन ठहराएको छ । यता दिदीले माइत जाने बेलामा आफ्नो झोला, पाउडर, हार, सारी, पैसा लुकाइदिने आफ्नो पतिको आलोचना गर्ने क्रममा महिलाको शृङ्गारका प्रसाधनमा मात्र मोह हुन्छ भन्ने पुरूषको कथनलाई बल पुर्याएकी छन् ।
गीतको भिडियोमा त झन् पतिले क्रिम, पाउडर दिनेबित्तिकै खुसीले फुरुङ्ग परेको देखाइएको छ । पितृसत्ताले महिलाप्रति गर्ने कुरूप राजनीतिको यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो ।
बुहारीलाई घरको निर्णायक र छोरालाई निरीह देखाएर महिलाद्वेषी पुरूष कूटनीतिको हदैसम्मको निकृष्टता प्रदर्शन गरिएका गीत वास्तवमै प्रतिबन्ध लगाउन लायक छन्
कुमारी चेपाङको ‘कसम बरिलै’ गीतमा आफैंले केटो रोजेर बिहे गरेकी छोरीले तीजमा माइती आउन नपाउनुको कारण खुलाएर मागी बिहेप्रतिको समर्थनको सङ्केत गरेकी छ :
गलामा सिक्री छैन मेरो दाजै के भन्लिन् आमाले
कसम बरिलै के भन्लिन् आमाले
आफूखुसी रोजेको घर हुनी रै’छ आफैंलाई कहर
आफूखुसी रोजेको घर हुनी रै’छ माइतीलाई कहर
आफैंले जीवनसाथी रोजेर बिहे गर्नु पुँजीवादी समाजको अभिलक्षण हो भने अभिभावकले खोजिदिएको व्यक्तिसित हुने विवाहचाहिँ परम्परावादी समाजको प्रचलन हो । पुँजीवादी युगकी यस गीतकी नायिकाले गरेको यस्तो पछुतोबाट यहाँ पुँजीवादभन्दा सामन्तवाद नै ठीक भन्ने प्रतिगामी चिन्तन प्रकट भएको हो ।
सन्तोष केसीको ‘घरझगडा’ बोलको गीतको महिलाद्वेषी चिन्तनचाहिँ यस्तो छ :
तेरो चोँचो राम्रो भए मलाई किन हेर्थे र
तैँले सुख देको भए मलाई ल्याउँथे र
मुखाले छौ दुईटी नै कोभन्दा को कम
छिमेकीले था पाउँछन् क्या धेरै नकराम्
अरूका त सौता पनि दिदी बहिनीझैँ बस्दछन्
भेट्नै हुन्न यी दुइटी त त्यसै झम्टन्छन्
यो गीतले कानुनद्वारा बर्जित बहुविवाह गर्ने लोग्नेलाई सज्जन, संयमित देखाउँदै लोग्नेको नजरमा नराम्री र सुख दिन नसक्ने स्वास्नी भए दोस्री बिहे गर्न जायज हुन्छ भन्ने पुरूषसत्ताको कुरूप भाष्य स्थापित गर्न खोजेको छ ।